Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Naasa hablood iyo rasaas goos goos ah oo weli la maqlayo – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii Naasa hablood iyo rasaas goos goos ah oo weli la maqlayo
MAREEG 25 June 2016 25 June 2016
Rasaas goos goos ah ayaa weli ka dhacaysa gudaha iyo agagaarka Hotel Naasa hablood oo ku yaalla nawaaxiga isgoyska KM-4 ee magaalada Muqdisho halkaasoo galabta ay weerar ismiidaamin ah iyo mid toos ah ku qaadeen dagaalyahano ka tirsan Al-Shabaab.
Saddex illaa afar nin oo hubeysan ayaa la sheegay iney gudaha u galeen hotelka markii uu qaraxii hore dhacay ka dib, waxaana sidoo kale galay hotelka ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan oo la dagaalamaya dableyda gudaha ku jirta oo illa hadda aan la ogeyn dhibaatooyinka ay geysteen.
Saraakiisha amaanka dowlada ayaa sheegaya iney dileen qaar ka mid ah dagaalyahanada galay hotelka, ayna socdaan howgalo lagu soo afjarayo weerarkan, iyadoo meydad rasaasta awgeed aan loo dhowaan karin ay daadsan yihiin laamiga hotelka hor mara.
Wararka ayaa sheegaya in Ilaalada Hotelka ay bad baadiyeen dad kooban oo gudaha Hotelka ku sugnaa, lamana oga illaa iyo hada in Hotelka ku jiraan Mas’uuliyiin iyo in kale.
Goobo ganacsi oo ku dhow Hotelka iyo Kaalin shidaal ayaa ku bur buray qaraxa, waxaana la soo sheegayaa in kaalinta shidaal ee ku taala agagaarka Isgoyska KM4 ay tahay mid gubaneyso.
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ayaa goor dhow Hotelka gaaray, waxaana la sheegayaa inay ka galeen hotelka qeybta dambe.
Illaa shan ruux ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen qaraxa, halka tiro intaa ka badan ay ku dhaawacmeen.
Al-Shabaab ayaa sheegatay weerarka, waxayna tilmaamtay in dagaalyahanadeeda ay gudaha Hotelka ku jiraan, isla markaana ay howl gal ka wadaan.
Xaalada nawaaxiga Km4 ayaa caawa kacsan, waxaana wadooyinka soo gala xiray ciidamo fara badan oo ku hubeysan gaadiid dagaal.
Ciidamada NISA oo gacanta ku dhigay gaari waxlaxaha qarxa laga soo buuxiyay “SAWIRRO”